Ayyaanni Irreessaa (Irreechaa) mallattoo Oromummaa waan ta’eef, bakkee hundattuu bal’inaan kabajamuu qaba - Ayyaantuu News
Ayyaanni Irreessaa (Irreechaa) mallattoo Oromummaa waan ta’eef, bakkee hundattuu bal’inaan kabajamuu qaba Abdii Boruutiin | Onkoloolessa 3, 2012
4 comments - What do you think? Posted by admin - 03/10/2012 at 8:10 am Categories:
4 Responses to “Ayyaanni Irreessaa (Irreechaa) mallattoo Oromummaa waan ta’eef, bakkee hundattuu bal’inaan kabajamuu qaba”
jiruu says:	03/10/2012 at 9:02 am	Galatoomi Abdii Boruu! Yaada gaarii nuuf dabarsite.
QBOn tumsa alagaa argachuu hin dandeenye. Warri alagaa amantii babal’isuuf yaalan fedhii isaanii harka lafa jalaatiin guuttachuuf malee ummata Oromoof dhimmanii miti. Otoo ummata Oromoof dhimmanii yeroo kanatti gargaarsi akkamitti hin argamne? Jedhanii of gaafachuun barbaachisaa dha.
Ummatni Oromoo Waaqa isaa bakka hundatti kadhata: Yeroo walgayii gaggeessuuf qophaawu, yeroo hongeen hammaate, yeroo fuudhaa fi heerumaa, yeroo ganni dabree birraan dhufu fi ganamaa, guyyaa fi galgala.
Waaqa nu uumeen Waaqa, Allaah, Jasuus yoo jenne rakkoo hin qabu. Rakkoo kan ta’u yoo Waaqa isa kootiitu isa kan keetii caala waliin jenne dha. Oromoon immoo rakkoo akkasii hin qabu. Abbootiin keenya amantii hundaafuu kabajaa fi safuu qabu. Kana waan beekaniif “Waaqa tokkicha maqaa dhibbaa” jedhu.
Oromootni dammaqinsa qaban yeroo ammaa kana waan heddu hubatanii arganiitu kan nu baasu Oromunmaa jabeessuu qofaa dha jedhanii murteeffatan.
dhuga says:	04/10/2012 at 10:13 am	Obbo Abdii,
Barreesa keef galata gudda argadhu. Kan guudaa abdi nama laatuuf kan gudda nama nama jajabeesudha. Ayyanni kun Ayyaana afuuraa (sprit) TOKKUMMA oromoo gudda of keesaa kan qabudha. Aayyanni kun kan sabni oromoo Uumaa isaa (Waaqaa, Allha, rabbi) afuuraa gudda tiin galateefatu waan ta’eef oromoon hundumtuu oddo jirutti qooda irrati fudhachun babalisuu qaba. Guyya Aayyana kana kan nuuf laatee Uumaa keenyaa waan ta’eef guyya kabajaa eenyuunuu hayama gaafachuun nuti hin jiru. (WE OROMOS HAVE TO DECLARE IT AS OUR HOLIDAY!!
Akka tokkumman wal qabanne Aayyanicha kabajachuuf baanee, obbolewwan kenyaa wara qabamanii oddo buuteen isaani dhabame ykn hidhamaan, tokkumaaan wal qabanee hikksiisuuf mootumichaa dura dhaabachuu qabna. Naannoo dhalootaa warra hidhameetii itti gaafatamoota (bulshitoota) naanoo sana hatattamaan akka hiiksisaan tokkumman dura dhabanee dirqisiisuu qabna. Biyyattis ta’ee biyya alaatti aafuuraa tokkumaa kanaan wal qabanee gaaffii haqa keenyaa oddo barbachisaa ta’eetti gafachuufi iyyachu akkasumas fira deegartoota haqa ilma nama irra horachufi deegarsa jabefachuu qabna.
Aafuurii Irreecha guddatte, jabatee bara baraan ha dagaaguu!!